आइतबार मे 30, 2021 |
आइतबार मे 30, 2021
विषय — प्राचीन र आधुनिक नेक्रोमान्सी, एलियास मेस्मेरिज्म र हिप्नोटिजम, निन्दा गरियो
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: 1 यूहन्ना3: 7
“"प्यारा बालकहरु, कुनै व्यक्तिलाई पनि तिमीहरुलाई छल्न नपाओस। ख्रीष्ट र्धमिक हुनुहुन्छ ख्रीष्ट जस्तो बन्नका निम्ति एक व्यक्तिले जो सही छ त्यो अनुसरण गर्नुपर्छ।"”
उत्तरदायी पढाइ: 1 पत्रुस5: 6-11
9 आफ्नो विश्वासमा दृढतापूर्वक बस।
1.2थिस्सलोनिकी2: 3,4(से 1st ,)
4 परमेश्वर वा कुनै पनि चीज जो मानिसहरूले पूजा गर्छन् त्यसले विरोध गर्छ।
2.2तिमोथी3: 1-5, 14-17
1 योयाद गर। अन्तिम दिनहरूमा आपदको समय हुनेछ।
3. 1 राजा 13: 11-21 (से 4th,), 22, 24 (से :)
12 बूढा अगमवक्ताले भने, उसले फर्किदा कुन बाटोमा यात्रा गर्यो? यसकारण छोराहरूले आफ्ना पितालाई त्यो बाटो देखाए जसबाट यहूदाबांट आउँने परमेश्वरको जन गएको थियो।
14 बूढा अगमवक्ता परमेश्वरका जनको पछि लागे। बूढा अगमवक्ताले परमेश्वरका जनलाई एउटा तारपीनको रूखतल बसेको पाए। बूढा अगमवक्ताले सोधे, के तिमी नै परमेश्वरका जन हो जो यहूदाबाट आएको हो? परमेश्वरका जनले बताए, हो, म नै हुँ।
15 तब बूढा अगमवक्तले भने, कृपया घर आऊ अनि मसित भोजन गर।
16 तर परमेश्वरको जनले भने, म तिमी सँग जान, सक्दिन। म यस ठाउँमा खाने-पिउने गर्न सक्दिन।
17 परमप्रभुले मलाई आदेश दिनु भएको छ, त्यस ठाउँमा तैंले केही खाने-पिउने गर्नु हुँदैन अनि त त्यही बाटोबाट फर्किनु हुँदैन जुनबाट पुगेको हुन्छस्।
18 तब बूढा अगमवक्ताले भने, तर म पनि तिमी जस्तैं नै अगमवक्ता हुँ। तब बूढा अगमवक्ताले एउटा झूटो कुरा गरे। उनले भने, परमप्रभुको एक जना स्वर्गदूत म कहाँ आयो। त्यो स्वर्गदूतले तिमीलाई मेरो घरमा लानु अनि तिमीलाई खाने-पिउने दिनुभन्यो।
21 अनि बूढा अगमवक्ताले परमेश्वरको जनसँग कुरा गरे जो यहूदाबाट आएका थिए। उनले भने, परमप्रभुले भन्नुभयो कि तिमीले उहाँको आदेश पालन गरेका छैनौ! परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले जो आदेश तिमीलाई दिएको थिए त्यो तिमीले पालन गरेका छैनौ।
22 परमप्रभुले तिमीलाई कुनै पनि ठाउँमा केही पनि न खानु भन्नु भएको थियो। तर तिमी फिर्ता आयौ अनि खान-पीन गर्यौ। यसकारण तिम्रो शरीर तिम्रो परिवारको चिहानमा गाडीने छैन।
4. भजनसंग्रह 43 : 1,2(से :), 3-5
1 हेपरमेश्वर, एकजना मानिस छ, जो तपाईंका भक्तजन मध्ये एकजना होइन। त्यो मानिस दुष्ट छ र झूटो बोल्दछ। हे परमेश्वर, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, अनि प्रमाण दिनु होस् कि म सही छु। मलाई त्यो मानिसबाट बचाउनु होस्।
2 हे परमेश्वर, तपाईं मेरो सुरक्षा-स्थल हुनुहुन्छ।
3 हे परमेश्वर, तपाईंको ज्योति र सत्यता ममाथि चम्कोस, तपाईंको ज्योति अनि सत्यताले मलाई बाटो देखाओस्। तिनीहरूले मलाई तपाईंको पवित्र पर्वत अनि तपाईं बस्ने मन्दिरमा डोर्याउनेछन्।
4 म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु। हे परमेश्वर, म परमेश्वरकहाँ आउनेछु जसले मलाई अत्यन्तै खुशी बनाउँनु हुन्छ। हे परमेश्वर, हे मेरो परमेश्वर, म वीणा बजाएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्छु।
5 किन म यति साह्रो तल झरें? किन म यत्ति साह्रो विचलित छु? मैले परमेश्वरको सहायताको निम्ति पर्खनु पर्नेछ, म फेरि अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्न मौका पाउँछु, उहाँले मलाई बचाउनु हुन्छ।
5. एफिसी4: 1-3, 13-15
6. एफिसी6: 10-18 (से ,), 23, 24
10 मेरो पत्रको अन्तमा म भन्छु, प्रभुमा र उहाँको महान शक्तिमा दृढ बन।
11 परमेश्वरले दिएको पूर्ण हातहतियार लगाऊ ताकि तिमीहरूले शैतानको कुचालको सामना गर्न सक्छौ।
12 हाम्रो लडाई पृथ्वीका मानिसहरूसित छैन। हामी त यस संसारको अन्धकारको शासक, अधिकारी र शक्तिहरूसित लडिरहेछौं। हाम्रो लडाई त स्वर्गीय स्थानको दुष्ट आत्मिक शक्तिहरूको विरूद्ध छ।
13 त्यसैले तिमीहरूले परमेश्वरको पूर्ण हातहतियार पाउनु आवश्यक छ। अनि मात्र अनि मात्र त्यस खराब दिनको सामना दृढता पूर्वक गर्न सक्छौ। जम्मै लडाईं शेष गरिसके पछि पनि अझै उभिरहन सक्छौ।
14 यसैले, कम्मरमा सत्यको पटुका कसेर, धार्मिक जीवनको छाती-कवच पहिरेर
15 प्रचारका निम्ति तयार हुनु शान्तिको सुसमाचरको जुत्ता जस्तो तिम्रो खुट्टामा लगाऊ।
16 अनि यी सँगै विश्वासको ढाल प्रयोग गर जसले दुष्टात्माको जम्मै जल्दो वाणलाई निभाउँदछ।
17 परमेश्वरको मुक्तिलाई आफ्नो शिर रक्षक बनाऊ अनि परमेश्वरको वचन समात जुन आत्माको तरवार हो।
18 सँधै पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। सब किसिमका प्रार्थनाहरू सहित प्रार्थना गर अनि आफुलाई चाहिएको हर थोक माग। यसो गर्नु तिमी सदा तयार बस। प्रार्थना गर्नु कहिल्यै नछौड। सँधै परमेश्वरका सबै मानिसहरूका लागि प्रार्थना गर।
23 तिमहरूलाई पिता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टले शान्ति र प्रेमको साथै विश्वास दिउन्।
24 तिमीहरू जम्मै जसले हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अनन्त माया गर्छौ, तिमीहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह रहोस्। ﻿
मेस्मरिज्म वा जनावरको चुम्बकत्वलाई 1775 मा जर्मनीमा मेस्मरले पहिलो पटक ध्यानमा लिएको थियो। अमेरिकन साइक्लोपीडियाका अनुसार उनले यस तथाकथित शक्तिलाई मान्दछन्, जसलाई उनी भन्छन् कि एउटा जीवित जीवले अर्को बिरामीलाई जोगाउन सक्छ र यो रोगलाई कम गर्ने माध्यम हो। उनका प्रस्तावहरू निम्नानुसार थिए:
"आकाशीय पिण्डहरू, पृथ्वी र एनिमेटेड चीजहरूका बीचमा परस्पर प्रभाव रहेको छ। पशु निकायहरू यस एजेन्टको प्रभावको लागि संवेदनशील हुन्छन् र स्नायुहरूको पदार्थको माध्यमबाट आफूलाई फैलाउँछन्।"
जनावरको चुम्बकीय क्रियाकलापका लेखकका आफ्नै अवलोकनहरूले उनलाई यो पक्का गर्‍यो कि यो एक उपचारात्मक एजेन्ट होइन, र यसको अभ्यास गर्नेहरूमाथि यसको प्रभाव पर्दछ, र यसको विषयलाई प्रतिरोध नगर्ने मानिसहरुमा नैतिक र शारीरिक मृत्युको कारण हुन्छ।
यदि पशु चुम्बकत्व कम हुन्छ वा रोग निको पार्छ भने, यो उपस्थिति भ्रामक छ, किनकि त्रुटिले त्रुटिको प्रभावहरू हटाउन सक्दैन। त्रुटि अन्तर्गत असुविधा आराम भन्दा राम्रो छ। कुनै पनि हिसाबले जनावरको चुम्बकत्वको प्रभाव छैन, हालसालै सम्मोहन भनिन्छ, भ्रमको प्रभाव बाहेक अन्य। यसबाट व्युत्पन्न कुनै पनि लागी लाभ यो जादू मा विश्वास को आनुपातिक छ।
पशु चुम्बकत्वको कुनै वैज्ञानिक आधार हुँदैन, किनकि परमेश्वरले वास्तविक, सामञ्जस्यपूर्ण, र अनन्त सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ, र उहाँको शक्ति न त पशु हो न मानव। यसको एउटा विश्वास हो र यो विश्वास जनावर हो, विज्ञानमा जनावरको चुम्बकीय, मेस्मेरिज्म, वा सम्मोहनवाद मात्र एक उपेक्षा हो, न कि बौद्धिक शक्ति, न शक्ति, न वास्तविकता, र यो हिसाबले यो तथाकथित नश्वर दिमागको एक अवास्तविक अवधारणा हो।
त्यहाँ एक मात्र आकर्षण छ, आत्माको। खम्बामा सियोको स केत दिनाले यो सबै-अगाल्ने शक्ति वा ईश्वरीय दिमागको आकर्षणको प्रतीक हो।
जनावरको चुम्बकीयताका हल्का रूपहरू अदृश्य हुँदैछन्, र यसको आक्रामक सुविधाहरू अगाडि आउँदैछन्। नराम्रो चिन्ताको अँध्यारो लुकाइराखेको अपराधको तानहरू हरेक घण्टा जाल बुन्ने जटिल र सूक्ष्म हुन्छन्। पशु चुम्बकत्वको वर्तमान विधिहरू यति गोप्य छन् कि उनीहरू युगलाई मोहित पार्छन र अपराधीले चाहेको बिषयवस्तुमा उदासीनता उत्पन्न गर्दछ।
भ्रमका ठूला ठूला मनहरू द्वारा लुकेको संसार संसार शैशवको पालनामा सुतेर घण्टाको सपना देख्दै छ। भौतिक ज्ञानले अस्तित्वको तथ्यलाई उदांग पार्दैन; तर आध्यात्मिक ज्ञानले मानव चेतनालाई अनन्त सत्यमा उचाल्छ। मानव पापले गर्दा बिस्तारै आध्यात्मिक समझमा बढ्दै जान्छ; सबै कुरा ठीकसँग सिक्नको लागि इच्छुक छैन, चर्चजगत्‌लाई सा गलाले बाँध्छ।
5. 102: 30-5 (से 1st.)
मानिसजातिले सिक्नुपर्दछ कि दुष्ट शक्ति होइन। यसको तथाकथित तानाशाही केही पनि होइन। ईसाई विज्ञानले दुष्टताको राज्य उजागर गर्दछ, र पूर्व-प्रख्यात परिवार र यसैले समुदायमा स्नेह र सद्गुणको प्रचार गर्दछ। प्रेरित पावल दुष्टको मूर्त रूपलाई "यस संसारको देवता" भनेर जनाउँछन् र यसलाई बेइमानी र धूर्तताको रूपमा परिभाषित गर्छन्।
राम्रोको अधिकतम असीम परमेश्वर र उहाँको विचार हो, सबैमा सबै। ईविल एक अनुमानिक झूट हो।
वास्तविकतामा त्यहाँ नश्वर दिमाग हुँदैन, र यसको परिणाम स्वरूप नश्वर विचार र इच्छाशक्तिको स्थानान्तरण हुँदैन। जीवन र अस्तित्व ईश्वरका हुन्। क्रिश्चियन विज्ञानमा मानिसले कुनै नोक्सान गर्न सक्दैन किनकि वैज्ञानिक विचारहरू साँचो विचारहरू हुन्, ती परमेश्वरबाट मानिसमा सर्दै जान्छन्।
जब क्रिश्चियन विज्ञान र पशु चुम्बकत्व दुबै बुझिन्छ, किनकि तिनीहरूको कुनै पनी मिति हुनेछैन, यस पुस्तकका लेखकलाई किन भेडाको लुगामा ब्वाँसोले यति अन्यायपूर्ण सतावट र बेइज्जत गरिएको छ भनेर बुझ्नेछ।
जसले आफ्नो विकसित मानसिक शक्तिलाई भागेको अपराधको रूपमा ताजा अत्याचार गर्न मौकाको रूपमा प्रयोग गर्दछ उसले सुरक्षित हुँदैन। परमेश्वरले उसलाई पक्रनुहुनेछ। ईश्वरीय न्याय उसलाई हेरविचार हुनेछ। उसको पापहरू उसको घाँटीमा ढु गाको थुप्रोमा परिणत हुनेछ। त्रुटिको उग्रताले यसको विनाशको पूर्वानुमान गर्दछ, र पुरानो अक्षको पुष्टि गर्दछ: "जसलाई देवताहरूले नष्ट गर्ने थिए, तिनीहरूले पहिले पागल बनाएका थिए।"
सत्यलाई भगवानले आफ्नै तरिकामा त्रुटि उजागर गर्न र नष्ट गर्न दिनुहोस्, र मानव न्यायलाई ईश्वरीय ढाँचा दिनुहोस्। पापले यसको पूर्ण दण्ड र यसको दुबै प्राप्त गर्दछ। न्यायले पापीलाई चिह्न लगाउँछ, र ईश्वरका मार्गहरू हटाउन नूहलाई सिकाउँदछ। ईर्ष्याको आफ्नै नरकमा, न्यायले झूट बोल्दछ जुन आफै अघि बढ्नको लागि, परमेश्वरको आज्ञालाई भंग गर्दछ।
"सबैभन्दा अध्यारो समय बिहान हुनुभन्दा अघि हो।"
यो भौतिक संसार अहिले विरोधाभासी शक्तिहरूको क्षेत्र पनि भइरहेको छ। एकातिर त्यहाँ कलह र निराशा हुनेछ; अर्को तर्फ विज्ञान र शान्ति हुनेछ। भौतिक विश्वासको टुक्रिभयो अनिकाल र रूढी, चाहना र शोक, पाप, बिरामी र मृत्यु जस्तो देखिन्छ, जुन तिनीहरूको चरणमा केही नभएसम्म नयाँ चरणहरू मान्दछन्। यी गडबडीहरू त्रुटिको अन्त्यसम्म जारी रहनेछ, जब सबै मतभिन्नताहरू सत्यतामा निल्नेछन्।
नैतिक रसायनिकरणमा मर्टल त्रुटि हराउनेछ। यो मानसिक किण्वन शुरू भएको छ, र विश्वासको सबै त्रुटिहरू बुझ्नको लागी पछि जारी रहन्छ। विश्वास परिवर्तनशील हुन्छ, तर आध्यात्मिक समझ परिवर्तन हुँदैन।
यो समाप्ति जति नजिकिंदै छ, ईश्वरीय विज्ञानको अनुसार आफ्नो मार्ग को रूपान्तरण गर्ने अन्त सम्म सहन हुनेछ। जब भौतिक ज्ञान घट्दै जान्छ र आध्यात्मिक समझ बढ्दै जान्छ, वास्तविक वस्तुहरू भौतिक रूपमा भन्दा मानसिक रूपमा समातिन्छ।
यो अन्तिम द्वन्द्वको समयमा, दुष्ट दिमागले अधिक खराबी पूरा गर्ने माध्यमहरू खोजी गर्ने प्रयास गर्नेछ; तर क्रिश्चियन विज्ञान बुझ्न सक्नेहरूले अपराधलाई नियन्त्रणमा लिनेछन्। तिनीहरूले त्रुटि को बेदखल गर्न सहयोग गर्दछ। उनीहरू कानून र व्यवस्था कायम गर्नेछन्, र खुशीको साथ अन्तिम पूर्णताको निश्चितताको प्रतीक्षा गर्नेछन्।
व्यापक तथ्यहरू उनीहरूको विरुद्धमा सबैभन्दा बढी मिथ्याहरू राख्छन्, किनकि तिनीहरूले आवरणमा त्रुटि ल्याउँछन्। सत्य कुरा गर्न साहस चाहिन्छ; उच्च सत्य उनको आवाज उठाउँछन् को लागी, जब सम्म यसको जड ध्वनी सदाको लागि विस्मृत मा चुप रहन्छ जोर आवाज चिल्ला त्रुटि हुनेछ।